एसईईको नतिजालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? – Janaubhar
एसईईको नतिजालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
प्रकाशित मितिः बुधबार, असार २०, २०७५ | 180 Views ||
विद्यार्थीलाई व्यवहारीक र वैज्ञानिक शिक्षा दिनुपर्छ
दानबहादुर केसी, प्राचार्य दाङ भ्याली उमावि
राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । २०२८ सालमा तत्कालिन सन्दर्भमा शिक्षामा आमुल परिवर्तननै भएको थियो । अहिलेको सन्दर्भमा पुरानो शिक्षा नीतिलाई फेरेर नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक परिवर्तन आउनुपर्ने हो,त्यो आउँन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन नहुँदासम्म यो परिवर्तनको खासै अर्थनै छैन ।
अहिले पनि घुमाई फिराई पुरानै शिक्षामा फर्कने काम भएको छ । आन्दोलन र संघर्षको बेला दोहोरो शिक्षा अन्त्य गर्ने कुरा खुबै चर्कोसँग उठ्यो । तर, अहिले घुमाईफिराई व्यक्तिले नै शिक्षा चलाउने प्रणालीलाई प्रसय दिने खालको छ ।
नेपालमा झनपछि झन शिक्षामा खाडल आउँदै छ । हुने खाने वर्गले पढ्ने शिक्षा र हुँदा खानेले पढ्ने शिक्षामा निकै फरक देखापरेको छ । सरकारले संविधानमै १२ कक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । अर्कोतिर निजी शिक्षालाई प्रसय दिने काम भएको छ । हुन त हामीले निजी विद्यालय चलाइरहेका छौं । यो हाम्रो बाध्यता हो । हामीले आफ्नो जिविकाका लागि काम गरेका छौं । तर, नीतिगत रुपमा हामी पनि निजी शिक्षाको विरोधी नै हौं ।
अब हामी सबै नेपालीका सन्तानले एउटै खाले शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ । अब शिक्षामा कसैको विभेद् हुनु हुँदैन् । शिक्षामा आमुल परिवर्तन हुँदासम्म हाम्रो देशले तीब्र रुपमा विकास गर्न सक्दैन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली बेरोजगारहरु उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ । बिद्यार्थीलाई व्यवहारीक र वैज्ञानिक शिक्षा दिनुपर्छ । कोरा घोकन्ते विद्याले हामीलाई ठिक ठाउँमा लैजादैन ।
Nextमाछाको बर्षा !